China Simba Imba fekitori uye vagadziri | Jitai
Zvigadzirwa zvepamusoro zvinosanganisira simbi pasuru yehybrid yakasanganiswa maseketi, opto-zvemagetsi zvinoriumba, microwave zvinoriumba, wave wave zvinoriumba, zvinoriumba zvinoriumba uye zvakakwirira-simba zvishandiso. Izvo zvigadzirwa zvinoshanda munzvimbo dzakadai sekubhururuka, muchadenga, zvemagetsi uye zvekutaurirana zvishandiso zvemauto nekutengesa. Kambani yatora chikamu chevashumiri chirongwa chekutsvaga kwesainzi, uye chinozivikanwa nevashandisi.
Iyo inogadzirwa nemaching maching kana CNC yekugaya michina, hapana chikonzero cheyakaumbwa modhi yeyaimbova kugadzirwa.Neyakagadziriswa dhizaini, ipfupi nguva yekukudziridza, inotungamira kutora yakaderera kuramba zvinhu zvakasiyana-siyana zvinotungamira nzira.Iyo inonyanya kushandiswa mune yakasviba uye yakaonda flim hybrid maseketi akabatanidzwa.
Iyi imba yemhando ndiyo hombe gungano remhando yemagetsi Hybrid Yakabatanidzwa Sedunhu, hwaro hwezvinhu inotonhora yakakungurutsirwa simbi kana oxgyen yemahara mhangura yezvakanaka zvemafuta zvinopisa zvinhu izvo zvinoparadzanisa kupisa kwakaburitswa nedunhu remukati kuenda kunze nekukasira kuitira kana kusagadzikana kukonzerwa nekupisa kuwanda. kazhinji inotora yakaderera kuramba nemhangura yakakwenenzverwa 4J50 chiwanikwa, inokodzera kudiwa kwekutapudzwa kwenzvimbo yepamusoro.Iyo inotungamira inowanzo kuve mbiri mumutsara uye huwandu hwacho ishoma (kazhinji 6 ~ 20 zvidimbu) chimiro cheimba chakakura uye chine chimiro cheungano ine flange , inowanzo gashira yakasarudzika kuifungira Au yekutungamira.
* Dzimba dzinotora zvinhu zveCRS1010, ine yakanaka kupisa kupisa.
* Inotungamira inotora yakaderera kuramba mhangura cored chiwanikwa zvinhu amd kugona kwazvino.
* Cap yekuvhara chisimbiso nzira inotora yakavimbika yakafanana yekuisa chisimbiso kutenderera tekinoroji.
* Iko kutumirwa kwepini pini kunofanirwa kutemwa nemutengi.
* Chivharo chakagadzirwa chakafemerwa padivi reimba yekutaridzika kweimba.
* Vatengi vanosarudza dzimba dzese dzakazara kana iyo inotungamira inosarudza yakanamirwa pamuromo Au zvinoenderana nezvavanoda.
* Dzese indexes dzinosangana nezvinodiwa zveGJB548B
Chikamu Chechipiri: Iyo dhizaini dhizaini yemagetsi edzimba
Chimiro modhi yemagetsi edzimba inotora maching centre kana CNC yekugaya michina.Hapana kudikanwa kweyaimbove akaumbwa maitiro ekuisa, inoshanduka dhizaini ipfupi nguva yekuvandudza.
1. Kusarudzwa kwezvinhu zvekugara
Imba yemagetsi inowanzo shandisa simbi inotonhora inotonhora neyakaipisa kupisa kupisa.
2.Iyo sarudzo yehukuru hwechimiro chedzimba
Kuiswa chisimbiso kweimba
Iyo yakakosha hermeticity yehunyanzvi zvinodiwa ndeye * 1 * 10-3Pa.cm3 / s yezvigadzirwa zvesimbi pasuru kuitira kuti icho chinhu chakakanganisa hermeticity iyo ukobvu hwedzimba inofanirwa kutariswa mukutarisisa.Zvakavakirwa pane yakareba nguva ruzivo mune sintering, kuvimbisa iyo hermeticity yechigadzirwa, iyo yekuisa mucherechedzo kune simba redzimba (inotonhora yakakungurutswa simbi yezvinhu) inofanirwa kudzorwa ≥1.5mm nepo kukamurwa kwehunyanzvi hwekugadzira magirazi ekuputira kukora kwayo hakufanirwe kuve kwakanyanya, kazhinji kushoma pane 2mm. Kuwedzera kufunga nezve hermeticity chinodikanwa. , iyo dzimba inowana nyore deformation mune sintering maitiro eakanyanya tembiricha, dhizaini yemadziro ukobvu weimba haifanire kunge iri diki.
②The gomba dhayamita regirazi insulator mudzimba
Iyo yakajairika dhizaini yemagetsi edzimba inotonhora yakakunguridzirwa simbi, Iron yekuisa chisimbiso girazi, 4J50 inotungamira ine comperssion yekuisa chisimbiso mamiriro. Chiyero che coefficient thermal kuwedzera ndi12: 9: 9, chimiro chemhando iyi chinonyanya kunoenderana nehupamhi pakati pemaburi egirazi uye hwakakora hwezvinhu. yesimbi inotonhora yakakungurutswa kuti ive nechokwadi chekugara, saka hupamhi hwezvinhu hunofanirwa kusangana nezvinodiwa.
Pashure: Chivhariso-In Sidewall Pasuru
Zvadaro: Flat Metal Pasuru
Feni Alloy Dzimba
Kufuridzira Sensor Package